Vahaolana maharitra | mandimby maharo
Posted on 25 September 2012 by Mandimby Maharo
Nipetraka etsy anoloanny 0lapa maitso Anosy nanomboka oaly 24 Septambra ilay vata mangarahara handrotsahana ireo fanampiana ireo havana any atsimo.
Fanampiana izay tena ilain’izy ireo noho ny fahasahiranana, mahazo azy ireo noho ny asan-dahalo. Miverimberina amin’ny fanentanana eo Anosy tokoa manko ny filazana fa efa an’arivo maro ireo mitsoam-ponenana, ary efa am-polony maro koa ireo maratra , Ankoatr’ireo kamboty an-jatony. Tolo-tanana ho azy ireo noho izany no angatahana amin’ny mponin’Antanananarivo.
Tsy any atsimo ihany nefa raha ny fantatra no ahitana olana eo amin’ity resaka asa ratsy ity. Atsy Bongolava ohatra dia mahery vaika ny asan-dahalo tamin’ity taona ity. Efa miisa 3000 koa ireo mpitsoa-ponenana mamonjy ny faritra Melaky, izay mpifanila amin’izy ireo.. Io faritry Melaky io moa dia azo lazaina fa nahafehy ny asan-dahalo izay nandrava tao koa taloha. Ny fampiharana ny Dinan’ny Tsy Mimpoly moa no antony lehibe nahatonga izao fiverenan’ny fandriampahalemana tao izao. Ny dina dia ilay fifaneken’ny tsirairay miara monina fa tsy azo atao ny mangalatra na manao asa ratsy eo amin’ny mpiara-monina. Voasazy ary mety hitarika hatramin’ny famaizana henjana tokoa ny fandikana izany fifanarahana izany. Tokony atao mifanaraka amin’ny lalana velona mifehy ny tany sy ny firenena koa nefa izany fifampifehezana izany ka afahan’ny fanjakana manara-maso ny fampiharana azy.
Raha ny tany amin’ny faritra atsimo dia efa nisy koa ny fampiharana Dina. Saingy tsy nifanaraka amin’ny lalana ka voatery natsahatra ny fampiharana izany. Io indrindra no tokony ho dinihina mba hampiverina ny fandriam-pahalemana ao atsimo ao.. Na inona ho ambara na inona, rehefa tsy asaina mandray an-tanana ny fiarahany monina ny olona dia tsy hirindra izany na hisy fanampiana avy amin’ny fanjakana sy ny vahoaka aza. Ny dina koa nefa dia misy fiankinany be amin’ny fomba sy fanao any amin’ny faritra piharana azy ka tsy tokony hirotorotoana ny fampiharana azy. Nahoby ny dinan(ny tsy mipoly tany Melaky fa mety tsy handaitra ao Androy sy Anosy. Vahaolana maharitra noho izany no tena ilaina fa tolo-tanana sy toro-gevitra ihany ireo.
One thought on “Vahaolana maharitra”
Pingback: “Inona ary izao no mahagasy anao?” « mandimby maharo